Ndingakwanisa here kuwedzera mao Amazon yangu yekutsvaga yekutengesa ne backend keyword optimization?
Mhinduro shoma ndeyekuti, zvinokwanisika kuwedzera maAsell sales ranking ne backend keyword optimization. Zvechokwadi, kana yakabata nzira yakarurama. Ndokusaka ndiri pasi apa ndichagovera ruzivo rwekwenyanzvi hunodiwa kuti uwedzere kuwedzera Amazon yako yekutsvaga kutengesa - zvakananga kuburikidza nekushandisa yako huru yekutsvaga mazwi mukati mune zvakananga tailored backend chikamu pa Amazon product page inonzi "kutsvaga mazwi. "Nenzira iyo, iwe uchakwanisa kuwana chikamu chakakura zvikuru chechipiri, uchienzaniswa necheche rakasvibiswa nevashori vako vane usimbe vasingateereri mukana uyu wegoridmine kuwedzera huwandu hwekutengesa kweAmerica - nguva inenge isina nguva, uye pasina kushanda- mabasa akaoma. Saka, pasi apa ndichaenda kukuratidzira maitiro ekugadzirisa nekukwanisa kuwedzera ma Amazon yako neyeri backend keyword chikamu - create customized easily.
Mazano Okudzorera Mashoko Okugadzirisa
Waiziva here kuti pane mitemo yakatarwa neAmazon Ita zvinhu zvose panzvimbo nezvo zvinotevera, uye paizove nechimwe chikonzero chakanakisisa cheA9 kuwedzera ma Amazon yako kutengesa.
Unofanira kungoshandisa nzvimbo kuitira kuti ugoparadzanisa rimwe nerimwe rekinyorwa mukati memutsara wako shure kubva kune imwe inotevera. Ndinoreva kuti chero zvimwe zviratidzo zvakadai semakasita kana semicolons hazvibvumirwi pamusoro apo.
Zvose mazwi echirevo kana mutsara wekutsvaga mutsara inofanira kuenzaniswa nenzira yakachena, yakagadzirwa kuitira kuti ionekwe nenzira yakazara. Semuenzaniso, apo mazwi akajeka se "big red carpet" zvakanaka, chero chinhu chakafanana ne "tsvuku tsvuku" haichazomboiti zvakanaka zvekutengeserana kwako.
Wakasununguka kushandisa zvinyorwa zvakakodzera (semuenzaniso, mazita emabhuku, mafirimu, nezvimwe. ), pamwe chete nedzimwe nzira dzinowanzogamuchirwa.
Chii Chinofanira Kudziviswa
Chingaita sechinhu chisina kumira, asi iva nechokwadi chokuti hauna chero chinhu chisingabatsiri, chakarurama kana pachena chinonyengera chinosanganiswa backend chikamu chikamu che "keyword terms. "Ndinoreva kuti iwe haufaniri kutumira chigadzirwa chako muchikamu chezvinhu zvisina kururama, kushandisa mashoko asina kufanira (kunze kwemuongorori), hutano husina kunaka, nezvimwe zvakadaro.
Kushandisa UPCs, ASINs yezvinhu, mazita emagetsi kana chimwe chinhu chiziviso chinonyanya kudiwa kuonekwa nekuda kwemashoko enyu ekudzokera shure ikoko.
Kuumba chero huwandu hwakareba kwenguva refu huchakukuvadza zvakanyanya, pane kuwedzera ma Amazon yako yekutengesa.
Kushandisa mazwi akazvimirira semhando "inoshamisa," kana mamwe mazwi okutsvaga pachena uye mashoko akadai se "zvakanakisisa kubata," "mutengo wakaderera" haugamuchirwi zvakare.
Chinhu chimwechete ndechokuti chero nguva ipi zvayo inotarisirwa, zvakadai se "kutengeswa," "chigadzirwa chitsva chinowanika," "zvigadzirwa zvishoma," nezvimwewo.
Mamwe mashoko anonyangadza kana mashoko anonyatsopesana anorambidzwa zvakasimba.
Kushandiswa kwechinangwa chero ipi zvayo mazita emiti asingashandisi haisi chinhu asi iyo pfungwa yakaipa (kunyange kana aya mashoko asina kushandiswa kana mashoko anonyanya kukwikwidza mashoko makuru).
Kusanganisira chero shanduro dzepelenzi, dzakadai sedzimwechete / dzakawandisa mafomu kana nzira dzakasiyana dzedzimwe mari hazvizomboverengwi nekuda kwako.